आइतबार जुन 13, 2021 |
आइतबार जुन 13, 2021
विषय — परमेश्वर मानवको रक्षा गर्नुहुन्छ
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 121 : 8
“"तिमी आउँदा र जाँदा परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीलाई अहिले र अनन्तसम्म सहयोग गर्नुहुनेछ!"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 16 : 1, 8, 9	•	2 शमूएल 22: 33	•	2 इतिहास16: 9	•	1 राजा 8: 61
1 हेपरमेश्वर, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, किनभने म तपाईं माथि नै आश्रित छु।
9 परमप्रभुको दृष्टि पृथ्वीभरि ती मानिसहरूलाई हेर्दै नजर राख्नुहुन्छ जो उहाँ प्रति विश्वसनीय छन् जसद्वारा उहाँले ती मानिसहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउन सक्नु हुन्छ।
61 सबै मानिसहरूले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर प्रति भक्त र सत्य हुनुपर्छ। तिमीले सँधै नै उहाँको विधि-विधान र आदेशहरू अनुसरण र पालन गर्नुपर्छ।
1. व्यवस्था 32 :3(मान्नु),4(से 1st :)
3 ...हाम्रा परमेश्वरको महानताको प्रशंसा गर।
4 उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ कारण उहाँका बाटाहरू सही छन्।
2. भजनसंग्रह 37: 37
37 शुद्ध र ईमान्दार बन। शान्ति प्रिय मानिसहरूले धेरै सन्तानहरू पाउनेछन्।
3. अय्यूब 1 : 1, 6-9 (से 2nd ,), 11, 12, 14 (से 2nd ,), 16 (आगो) (से;), 18 (तिम्रो)-20
7 परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, अहिलेसम्म तँ कहाँ थिइस्? शैतानले परमप्रभुलाई जवाफ दियो, म पृथ्वीकै वरिपरि घुमिरहेको थिँए।
8 तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, तैंले मेरो दास अय्यूबलाई देखिस्? यस पृथ्वीमा ऊ जस्तो कुनै मानिस छैन। अय्यूब एक असल र इमान्दार मानिस छ। उसले परमेश्वरको आराधना गर्छ र नराम्रा कामहरूदेखि सधैं टाडो रहन्छन्।
9 शैतानले जवाफ दियो
11 तर यदि तपाईंले उसँग भएका सारा कुराहरू नष्ट गरिदिनु भयो भने, म दृढता पूर्वक भन्छु कि उसले तपाईंलाई तपाईंकै सामु सराप्नेछ।
12 परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ठीक छ, अय्यूबसँग भएका जे पनि कुराहरूमाथि तँ जे चाहन्छस् गर। तर उसको शरीरलाई चोट नपुर्या।”तब शैतान परमप्रभुदेखि टाढा गयो।
14 तब एकजना सन्देश-वाहक अय्यूबकहाँ आए र भने।
16 आकाशबाट आएको चट्याङले तपाईंको सारा भेडाहरू र नोकरहरू मार्यो। यो समाचार तपाईंलाई दिन म मात्र बाँचे।
18 तपाईंका जेठा छोरोको घरमा तपाईंका अन्य छोरा-छोरीहरूले खाइरहेका र दाखरस पिइरहेका थिए।
19 तब एक जोडदार हावा मरूभूमिबाट अचानक चल्यो र त्यसले घर घराशायी पारिदियो। त्यो घर तपाईंका छोरा-छोरीहरूमाथि बज्रयो, अनि तिनीहरू सबैजना मरे। यो समाचार तपाईंलाई दिन म मात्र बाँचे।
4. अय्यूब2:3(से 1st ,),3(अझै) (से,),4(से 2nd ,), 5-7, 11, 13 (को लागी)
3 तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो ...दिएता पनि अझ उसले सही काम नै गर्छ।
4 शैतानले जवाफमा भन्यो।
5 यदि तपाईंले आफ्नो शक्ति उसको शरीरलाई चोट पुर्याउनु भयो भने, तब उसले तपाईंको मुखकै सामुन्ने तपाईंलाई सराप्ने छ।
6 यसकारण परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ठीक छ, अय्यूब तिम्रो अधीनमा छ। तर उसलाई मार्ने अनुमति भने तँलाई छैन।
13 ...तिनीहरूले अय्यूबलाई सही नसक्ने पीडाले ग्रस्त पारेको बुझे।
5. अय्यूब3: 1, 3, 25 (से,)
3 उनले भनें म जन्मेको जुन दिन थियो त्यो सधैंको लागि लोप होस् अनि जुन रात तिनीहरूले मलाई त्यो केटो हो भने त्यो रात पनि हराओस् भन्ने म कामना गर्छु।
6. अय्यूब4: 1, 3, 5
7. अय्यूब6: 1
1 तब अय्यूबले जवाफ दिए।
8. अय्यूब 7: 20
20 यदि मैले पाप गरेको छु भने, सजाय दिनुहोस्, मैले के गर्न पर्छ र? किन तपाईंले मलाई निशाना बनाई प्रयोग गर्नु भयो? के म तपाईंको निम्ति एक समस्या भएको थिएँ र?
9. अय्यूब 8: 1, 3, 19, 20
10. अय्यूब 9: 1, 20, 21
11. अय्यूब 11: 1,6(चिन्छु), 7
6 तिमीले जति दण्ड पाउनु पर्थ्यो परमेश्वरले त्यति दण्ड तिमीलाई दिइरहनु भएको छैन।
12. अय्यूब 38: 1-4, 33
2 त्यो अज्ञानी मानिस को हो जसले यस्ता मूर्ख कुराहरू गरिरहेको छ?
4 तिमी कहाँथियौ जब मैले पृथ्वी सृष्टि गरे? यदि तिमी यो जान्दछौ भने मलाई जवाफ देऊ।
13. अय्यूब 40: 8, 10
14. अय्यूब 42: 1, 2,3(त्यसकारण), 5, 7, 8 (जाऊ) (से 1st :),9(से:), 10, 12 (से:)
2 परमप्रभु, म जान्दछु तपाईंले सब कुराहरू गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले योजनाहरू बनाउनु हुन्छ, अनि कसैले पनि परिवर्तन गर्न वा रोक्न सक्तैन।
3 ...मैले ती कुराहरूको बारे बोलें जुन मैले बुझिनँ। मैले ती कुराहरू भनें जुन मेरो लागि बुझ्नु अति अचम्मित थियो।
5 परमप्रभु बितेका दिनहरूमा, मैले तपाईं बारे सुनेको थिएँ तर अहिले तपाईंलाई मेरै आँखाले देखें।
7 अय्यूबसँग बात-चीत गरिसके पछि, परमेश्वर तेमानीबाट आएका एलीपजसँग बोल्नु भयो। परमेश्वरले एलीपजलाई भन्नुभयो, म तिमी साथै तिम्रो दुइ साथीहरूसँग रिसाएको छु। किन? किनभने तिमीहरूले मेरो विषयमा सही कुरा गरेनौ। तर अय्यूब मेरो सेवक हो। अय्यूबले मेरो विषयमा ठीक कुरा गर्छ।
8 ती सब मेरो सेवक अय्यूबलाई देऊ। तिनीहरूलाई मार तिमीहरूका निम्ति होमबलि अर्पण गर। मेरो सेवक अय्यूबले तिमीहरूका लागि प्रार्थना गर्नेछ अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनेछु।
9 यसकारण तेमान बासिन्दा एलीपज अनि शुहबाट आएका बिल्दद साथै नाउँबाट आएका सोपरले परमप्रभु आज्ञा पालन गरे।
12 परमप्रभुले अय्यूबसँग शुरूमा भएको भन्दा बढी सम्पन्न हुने आशिर्वाद दिनुभयो।
15.2तिमोथी 1: 1, 2, 7
16.2तिमोथी 2: 1
1 तिमी मेरो छोरो जस्तो हौ। ख्रीष्ट येशूमा भएको हाम्रो अनुग्रहमा दृढ बन।
17.2तिमोथी 3:2(से 1st,),4(सुखको प्रेमी), 5, 14
2 ती दिनहरूमा मानिसले आफूलाई र पैसालाई मात्र।
4 तिनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा सुखभोगलाई अधिक प्रेम गर्ने हुन्छन्।
5 तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे जस्तो त गर्नेछन्। तर व्यवहारमा तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दैनन्। त्यस्ता मानिसहरूबाट टाडा बस।
18.2कोरिन्थी 13 : 11 (सिद्ध हुनुहोस्)
11 मैले तिमीहरूलाई भनेको कुरा गर। एक अर्कासित मिल र शान्तिसित बस। तब प्रेम र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसित हुनुहुनेछ।
परमेश्वर जीवन, वा बौद्धिकता हुनुहुन्छ, जसले पशु र मानिसहरुको व्यक्तित्व र पहिचानको रूप र संरक्षण गर्दछ। भगवान सीमित हुन सक्दैन, र भौतिक सीमाहरू भित्र सीमित हुन। आत्मा पदार्थ हुन सक्दैन, न आत्मा यसको विपरितबाट विकास गर्न सकिन्छ। यस बेकम्मा भौतिक जीवन के हो भनेर अन्वेषण गर्न के फाइदा छ, जुन अन्त्य हुन्छ, शुरू भए पनि, अज्ञानी शून्यतामा? अस्तित्वको वास्तविक अर्थ र यसको अनन्त पूर्णता अब देखिनेछ, जस्तो कि यो भविष्यमा पनि हुनेछ।
2. 302 : 14 (गरौं)-24
... हामी सम्झौं कि सामञ्जस्यपूर्ण र अमर मानिस सदाको लागि रहन्छ, र कुनै पनि जीवन, पदार्थ, र बौद्धिक पदार्थको अस्तित्वको रूपमा नश्वर भ्रमको पछाडि र माथि हो। यो कथन तथ्यमा आधारित छ, कल्पित छैन। बुबा सिद्ध हुनुभएझैं मानिस पनि सिद्ध छ किनकि बुबा सिद्ध छ, किनकि आत्मिक व्यक्तिको आत्मा, वा दिमाग, परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूको ईश्वरीय सिद्धान्त, र किनभने यो वास्तविक मानिस भावनाको सट्टा आत्माद्वारा शासित छ, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा तथाकथित कानून द्वारा होईन।
तपाईंको बुझाइमा दृढ हुनुहोस् कि ईश्वरीय दिमागले शासन गर्छ, र विज्ञानमा व्यक्तिले परमेश्वरको सरकार प्रतिबिम्बित गर्दछ।
यदि हामी शरीरसँग संवेदनशील छौं र सर्वव्यापीतालाई शारीरिक, भौतिक व्यक्तिको रूपमा हेर्छौं, जसको कान हामी प्राप्त गर्दछौं, हामी आत्माको प्रदर्शनमा "शरीरबाट अनुपस्थित" हुँदैनौं र "प्रभुसँगै" उपस्थित हुँदैनौं। हामी "दुई मालिकको सेवा" गर्न सक्दैनौं। "प्रभुसामु" उपस्थित हुनु भनेको भावनात्मक एक्स्टेसी वा विश्वास मात्र नभई जीवनको वास्तविक प्रदर्शन र बुझाइ क्रिश्चियन विज्ञानमा प्रकट भएको हुनुपर्दछ। "प्रभुको साथ" हुनु भनेको परमेश्वरको व्यवस्थाको पालना गर्नु हो, पूर्ण रूपमा ईश्वरीय प्रेमको अधीनमा हुनु हो - आत्माद्वारा, कुनै कुराले होईन।
हामीले हाम्रो शरीरलाई भलाइ बिर्सनु पर्दछ राम्रो र मानव जातिलाई सम्झनामा। मान्छे को राम्रो माग हरेक घण्टा, जसमा समस्या को बाहिर काम गर्न। राम्रो संग शान्ति भगवान मा मानिस को निर्भरता कम गर्दैन, तर यो बढाउँछ। न त पूजाले मानिसलाई परमेश्वरप्रतिको दायित्व कम गर्छ, तर तिनीहरूलाई भेट्नु अत्यावश्यक आवश्यकता देखाउँदछ। इसाई विज्ञानले परमेश्वरको पूर्णताबाट केही पनि लिदैन, तर यसले सम्पूर्ण महिमा उहाँमा छ। "बुढो मानिसलाई उसको कार्यहरु सहित" "मानिसहरु" लाई अमरत्वमा राख्छ। "
अय्यूबले भने: "मैले तपाईंको कानबाट सुनेको छु, तर अब मेरो आँखाले तिमीलाई देख्दछ।" मोर्टल्सले अय्यूबको विचारलाई प्रतिध्वनित गर्दछ, जब मानिएको पीडा र पदार्थको सुख प्रमुख हुन बन्द हुन्छ। तब उनीहरूले जीवन र खुशीको खुशी अनुमान, खुशी र दु: ख, र निःस्वार्थ प्रेमको, धैर्यपूर्वक काम गर्ने, र ईश्वर जस्तो नभएको सबैलाई जित्न सक्ने खुशीको झुण्ड प्राप्त गर्नेछन्।
मानिस, आफ्नो निर्माताले शासन गरेको, कुनै अन्य दिमाग नभएको - ईन्जेलिस्टको भनाइमा "सबै थोक उहाँ [परमेश्वरको वचन] द्वारा बनाइएको थियो" र उहाँबिना बनाइएको कुनै पनि कुरा बनाइएको थिएन "- यसले पापमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। , बिमारी, र मृत्यु।
ईश्वरीय विज्ञान मा, मान्छे परमेश्वरको वास्तविक छवि हो। ईश्वरीय प्रकृति येशू ख्रीष्टमा उत्तम रूपमा व्यक्त गरिएको थियो, जसले ईश्वरको सत्य प्रतिबिम्बमाथि मृत्युमाथि प्रहार गर्नुभयो र तिनीहरूको जीवनलाई उनीहरूको नराम्रो विचारधाराले अनुमति दिन सक्ने भन्दा उच्च स्थानमा राख्नुभयो - - यस्तो विचार जसले मानिसलाई पतित, बिरामी, पाप र मृत्युको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। वैज्ञानिक अस्तित्व र ईश्वरीय उपचारको बारेमा ख्रीष्टको जस्तै समझले सिद्ध सिद्धान्त र विचार, सिद्ध भगवान र सिद्ध मानिस - विचार र प्रदर्शनको आधारको रूपमा समावेश गर्दछ।
हामी इसाई वैज्ञानिकहरू हौं, केवल जुन हामीले झूट र सत्यलाई बुझ्यौं त्यसमाथि हाम्रो भरोसा छोड्दछौं। हामी ख्रीष्टियन वैज्ञानिकहरू होइनौं जबसम्म हामीले सबै ख्रीष्टको लागि छोड्दैनौं। मानव विचारहरु आत्मिक हुँदैनन्। तिनीहरू कानको सुनुवाइबाट, सिद्धान्तको सट्टा कर्पोरेलिटीबाट, र अमरको सट्टा नरकबाट आएका हुन्। आत्मा परमेश्वरबाट अलग छैन। आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
साँचो आध्यात्मिकताको शान्त र बलियो धारणा, स्वास्थ्य, शुद्धता र आत्मदाह जस्ता व्यक्तिको अभिव्यक्तिले मानव अनुभवलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्दछ, जबसम्म भौतिक अस्तित्वको विश्वासलाई टाउको लगाउँदैन, र पाप, रोग, र मृत्यु दिन्छ। ईश्वरीय आत्माको वैज्ञानिक प्रदर्शन र परमेश्वरको आध्यात्मिक, सिद्ध मानिससित अनन्त स्थान।